ချိန်ညှိနိုင်သော Crystal ခွေးပေါက်လေး Rhinestones ခွေးလည်ဆွဲနှင့်လည်စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ - BEST-HOME
နေအိမ် > မူလစာမျက်နှာ > ခွေးလည်ပတ် > Bow Tie နှင့်အတူ Adjustable Crystal ခွေးပေါက်လေး Rhinestones ခွေးကော်လာ
Puppy Bling ကော်လာ 1 လုံး Rhinestone ခွေးကော်လာ 1 Piece Rhinestone အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ခွေးကိုလေးနှင့်ဆွဲ။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကော်လာ Puppy, Crystal Dog Dog လည်ဆွဲနှင့် Rhieestone ခွေး puppy ကော်လာသေးငယ်တဲ့ခွေးများအတွက် Bling
ချိန်ညှိ Crystal ခွေးကလေးBlingလေးနှင့်အတူ Rhinestones ခွေးကော်လာ
ချိန်ညှိ Crystal ခွေးကလေးBling လေးနှင့်အတူ Rhinestones ခွေးကော်လာ
ကတ္တီပါ Microfiber + သွပ် Alloy Buckle + Rhinestone
အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်
XS: ၁.၅ * ၃၀ စင်တီမီတာ S: ၁.၅ * ၃၆ စင်တီမီတာ M: ၂ * ၄၀ စင်တီမီတာ L: ၂.၅ * ၅၀ စင်တီမီတာ XL: ၃ * ၅၆ စင်တီမီတာ
1pcs/ Polybag,,300pcs / ပို့ဆောင်ပုံးများ
Puppy Bling ကော်လာ 1 လုံး ရိုင်ဖယ်ခွေးကော်လာ 1 Piece သတ်မှတ်သည်ရိုင်ဖယ်လေးနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကော်လာချည်ထားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးကြောင်ခွေးကလေးသည်,Crystal Dog Collar with Bow ချည်ထား ရိုင်ဖယ်Puppy Collars Bling for Small Dogs
♥XS အရွယ်အစား:Width 3/5inch(1.5cm), Collar Adjustable အရွယ်အစား: 7.8-10.0inch(20-26cm).e.g.:7-12lbs dogs etc.
™ soft ၁၀၀% ကတ္တီပါသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူသည်။ ကော်လာ၏အတွင်းပိုင်းကိုညင်သာစွာပိတ်ထားပြီးသင့်ခွေးလည်ပင်းကိုပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အမျက်ထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လွယ်ကူသော leash ပူးတွဲမှုသို့မဟုတ် ID အမှတ်အသားများအတွက်ခွေးကော်လာ၏ထိပ်ရှိလေးလံသောသံမဏိ D လက်စွပ်။ ခိုင်ခံ့သောကြေးဝါဟာ့ဒ်ဝဲသံချေးမည်မဟုတ်နှင့်သားရေမှလုံလုံခြုံခြုံချုပ်ထားသည်။
•စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။ ခွေးပေါက်စကော်လာကော်လာသည်လွယ်ကူစွာထိတွေ့နိုင်သောသက်တောင့်သက်သာဖိုက်ဘာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင့်ခွေးလည်ပင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ rhinestone နှင့်သွပ်သတ္တုစပ်သည်ထိရန်လွယ်ကူသည်။ ကော်လာများသည်ပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်အိတ်ထဲလွယ်လွယ်ကူကူခေါက်။ လွယ်ကူစွာနေရာယူနိုင်သည်
♥ ရိုင်ဖယ်and bow design: the pet dog collars contain2designs, including simple rows of rhinestones collar and rhinestones collar with double-layer bow, presenting beautiful and shiny effect when under the light, making your pets more charming and elegant
™ applications ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှု - ဤကြံ့ခိုင်ခွေးကော်လာများသည်အဓိကကျသောပါတီပွဲ၊ မွေးနေ့ပွဲ၊ ခရစ်စမတ်၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း၊ စျေးဝယ်ခြင်းစသည်ဖြင့်သာမက၊ သင်၏မိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအတွက်လည်းစတိုင်လက်ဆောင်များအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်ရှိပါတယ်
hot Tags:: ထိန်းညှိနိုင်သောခွေးပေါက်စ Bling Rhinestones ခွေးလည်ပင်းနှင့်လည်စည်း၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စျေးပေါ၊ အသစ်၊
Bling Rhinestone ခွေးကော်လာ
ရောင်စုံပျော့ပျောင်းသော Whelping Puppy ID ဆီလီကွန်ခွေးကော်လာ
သဘာဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးခွေးခွေးလှေးနှင့် Tick ကော်လာ
Adjustable Luxury Padded Pet Soft PU သားရေခွေးကော်လာ
Adjustable Custom Soft Neoprene Padded Reflective Dog Collar